Antwerp, toeran-kaleha any Flanders | Vaovao momba ny dia
Antwerp, toeran-kaleha any Flanders
Mariela Carril | | Pays-Bas, Inona no ho hita
Antwerp Io no renivohitry ny faritany mitovy anarana misy azy io amin'ny flanders. Tanàna mahafinaritra izy io, 40 kilometatra monja miala an'i Bruxelles, manankarena, mavitrika, tena ara-barotra sy ara-kolontsaina, miaraka amin'ny iray amin'ireo seranan-tsambo eropeana manan-danja indrindra. Hitanay ve ny Toeram-pizahantany Antwerp?
Amin'izao fotoana izao, ny toe-javatra mifandraika amin'ny Covidien-19 dia mitovy amin'ny any Eropa hafa, avy fanokafana miadana sy miadana. Misokatra izao ireo tranombakoka, fivarotana, tranobe manan-tantara, trano mimanda, trano fisakafoanana ary kafe. Afaka manao dia manerana ny firenena ianao ary amin'ity volana jolay ity dia efa nisokatra ny teatra, sinema, zaridaina fialamboly, filokana ary dobo filomanosana.
2 Fizahantany Antwerp
Ny tanàna dia eo amoron'ny renirano Scheldt, raha ny nolazainay dia 40 kilometatra monja avy any Bruxelles ary 15 monja avy amin'ny sisintany miaraka amin'i Netherlands. Ny faritr'i Flanders dia faritra iray miteny Flemish, fitenim-paritra holandey iray. Nandritra ny tantara dia niovaova ny habeny: raha tamin'ny vanim-potoana antenantenany dia faritany iray ihany, avy eo nibodo faritra lehibe kokoa, namakivaky an'i Belzika, Netherlands, Luxembourg, France ary Alemana.
Androany dia manana toerana telo i Flanders, ampahany iray any Belzika, iray hafa any Frantsa ary iray hafa any Netherlands. Mikasika an'i Antwerp, tanàna manana ny niandohany tao a vicus gallo-roman, taty aoriana, tamin'ny taonjato faha-XNUMX, dia lasa ampahany amin'ny Fanjakana Romanina MasinaTaty aoriana, nitombo ny famirapiratany tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary noho izany, tao anatin'ny fikomiana, asa ary famonoana olona dia nahatratra ny taonjato faha-XNUMX. Avy eo, dia nibodo azy i Alemana ary navotsotry ny Allies.
Afaka misafidy ny hahita ianao any Antwerp tranombakoka, fisarihana, fiangonana, tsangambato, zava-mahatalanjona amin'ny maritrano, valan-javaboary na toerana feno tantara. Andao hiresaka momba ny fiangonana: ny tanàna dia manana tempoly manan-tantara maro, eo amin'ireo fiangonana, sinagoga ary moske.
La Katedraly ny vadintsika Naharitra 169 taona ny fananganana azy ary nanjary nanjakazaka tamin'ny lanitra ny tanàna tamin'ny 1521 raha nahatratra 123 metatra ny haavon'ny lakolosy. Izany dia Fomba gothic ary mirakitra sanganasa kanto maro, eo Miasa Rubens fa anio dia hita amin'ny fotoana lehibe aorian'ny famerenana amin'ny laoniny ny roapolo taona. Manomboka amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 3 tolakandro izy io.
Misy koa ny Fiangonan'i San Carlos Borromeo, izay hita be ny hajia Rubens. Izy io dia fiangonana notendren'ny Zezoita ary natsangana eo anelanelan'ny 1615 ka hatramin'ny 1621. Ny alitara lehibe sy ny trano fiangonana ao Santa María dia tsara tarehy, miaraka amin'ny sary sokitra hazo marobe sy mekanika manontany tena sy tany am-boalohany ambonin'ilay alitara lehibe izay manova ny hosodoko. Manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 12 hariva ary manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 5 hariva.
La Fiangonana San Andrés Izy io dia tempoly tsara tarehy iray hafa tamin'ny taonjato faha-70, miorina eo amin'ny manodidina an'io anarana io ihany. Manana alitara baroque sy tsangambato ho an'ny Queen Mary Stuart, Queen of Scots. Ny fiangonana dia amin'ny endrika Gothic farany ary naverina tamin'ny laoniny tamin'ny taona 36. Ny alitarany dia mametraka, lava, tsara tarehy, miaraka amin'ny reliquary misy olo-masina XNUMX. Avy eo, raha liana amin'ny fiangonana ianao dia misy ny Monumental Church of Antwerp, ny Church of Saint Paul ary ny Church of Saint James.
Somary tsy dia nentin-drazana ve ianao raha ny fizahantany? Avy eo dia misy zoro ao Antwerp fa ho tianao izany. Ohatra, ny Underpass na Tunnel Santa Ana. Andalana iray nosokafana tamin'ny 1933 izany miampita ny ony ary izay idiran'ny escalator hazo. Zoro mahafinaritra hafa ao amin'ny Vlaeykensgang alley nanomboka tamin'ny 1591.
Mampifandray ny Hoogstraat sy ny Oude Koormarkt Pelgrimstraat ity lalana ity ary rehefa miampita azy ianao dia toy ny mandeha an-tongotra. Taloha dia io alley io dia nonenan'ireo mpanao kiraro sy olona tena mahantra. amin'izao fotoana izao misy trano sy galerie fahagola ary trano fisakafoanana manokana ihany koa.
Eo koa ny Grt markt tany am-boalohany dia kianja na karazana forum hita ivelan'ny manodidina ny trano medieval. Natao ny foara sy ny tsena fanao isan-taona izay nanaovan'ireo mpivarotra anglisy ny orinasany niaraka tamin'ny Italiana, Espaniôla na ireo avy any avaratr'i Eropa.
Raha miresaka raharaham-barotra, ankehitriny ny kinova maoderina no be korontana indrindra seranan-tsambo antwerp. Goavana ary fomba iray hankasitrahana ny fihetsiketsehany ny mandehana mandeha sambo na manofa bisikileta ary araho ny tambajotran'ny lalana mijery ny faritry ny seranana.
Raha mandeha fahavaratra ianao, dia mety misy toerana mety hialana sasatra sy handany ora vitsivitsy Morontsiraka Saint Anneke, eo amoron'ny renirano. Afaka mankany ianao amin'ny alàlan'ny sambo, mandeha an-tongotra na bisikileta na amin'ny bus na tram, ary mankafiza fomba fijery panoramic, hano ny akamako eo an-toerana, malaza be, milentika masoandro na mikoropaka amin'ny pisinina ivelany eto.
Ankoatra ireo zoro hafakely ao Antwerp ity dia manolotra antsika ny tanàna tranombakoka izay mety tsy te-hijery an-tsehatra ianao. izany Trano Rubens, Tranombakoky ny zavakanto kanto any Antwerp, ny tranon'ny literatiora, ny Museum an'i Reede, ny Tranombakoka Eugeen Van Mieghem, ny FOMU Museum of Photography na ny tranom-bakoka Plantin-Moretus.
Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny Trano fivarotan-tsena tranom-bakoka ao amin'ny tanàna miaraka amin'ny tantaram-peo enina taonjato, na ny Tranon'ireo tovovavy izay niasa ho toy ny trano fitaizana zaza kamboty ho an'ny zazavavy tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Mba hahitana ny panorama feno an'ireo tranombakoka any Antwerp dia ny zavatra tsara indrindra dia ampidino amin'ny fampiharana Antwerp Museum, azo sintonina ao amin'ny Play Store na AppStore.
Safidy iray hafa atolotry ny tanàna anao dia ny mividy ilay Antwerp City Card. Misy kinova telo, 24, 48 ary 72 ora ary ankoatry ny fanokafana ny varavaran'ny tranombakoka sy ny manintona (tranombakoka 15 tampony, fiangonana fiangonana 4 ary manintona 2), fihenam-bidy eo anelanelan'ny 10 sy 25%, ahafahanao mandeha maimaim-poana amin'ny ny rafitry ny fitaterana an-tanàna.
Farany fa tsy latsa-danja amin'izay: Internet WIFI! Antwerp dia manome Internet ho an'ny mpitsidika azy. Misy faritra WiFi maimaim-poana marobe: Via Sinjoor, ny làlana manelanelana ny Central Station mankany Scheldt, Grote Markt, Meirbrug, Schoenmarkt, sns. Mila misoratra anarana fotsiny ianao.
Farany, alamino ny fitsidihanao Raha manana andro vitsivitsy ianao: mifidiana eo amin'ny Ivotoerana manan-tantara, ny faritra afovoan-tseranana, ny distrikan'ny teatra, ny distrikan'i San Andrés, ny distrikan'ny oniversite, ny distrika jiro mena ... Ny zavatra kely rehetra dia hanome anao panorama tsy hay hadinoina ity tanàna ity izay maro Indraindray dia mijanona ao anaty lisitra faniriana satria ny sasany mandresy, toy ny mpamosavy, ohatra, na Amsterdam.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » firenena » Pays-Bas » Antwerp, toeran-kaleha any Flanders
Inona no ho hita any Suisse
Inona no ho hita any Kroasia